घरमा राखेको फ्रिज बिस्फोट हुदा परिवारनै सखाप – PathivaraOnline
Home > समाचार > घरमा राखेको फ्रिज बिस्फोट हुदा परिवारनै सखाप
घरमा राखेको फ्रिज बिस्फोट हुदा परिवारनै सखाप
admin October 3, 2018 समाचार 0
भारतको मध्यप्रदेश राज्यको ऐतिहासिक शहर ग्वालियरमा घरमा राखेको फ्रिजमा विष्फोट हुँदा एकै परिवारका चार जनाको ज्यान गएको छ ।भारतीय मीडियाहरूमा प्रकाशित समाचार अनुसार घरमा सर्ट सर्किटका कारण लागेको आगोबाट फ्रिजको कम्प्रेसर पाइपमा विष्फोट हुँदा उक्त दुर्घटना भएको थियो ।
प्राप्त समाचार अनुसार उक्त विष्फोटपछि छिमेकी घरको छात भत्केको र उक्त घरमा सुतिरहेका चार जनाको ज्यान गएको हो । मृत्यु हुनेमा ५० वर्षी अंतराम सिंह परिहार, उनकी ४५ वर्षीय पत्नी उमा र उनका दुई छोरीहरू १४ वर्षीय खुशी र ११ वर्षीय कशिश रहेका छन् । परिहारका १७ वर्षीय छोरा भने उक्त घटनामा बाँच्न सफल भएका छन् ।
मृत्यु हुने दुई किशोरीहरू जिल्लास्तरका जुनियर बक्सिङ च्याम्पियन रहेको बुझिएको छ । यसमा जेठी खुशी राष्ट्रिय र कान्छी कशिश प्रदेश च्याम्पियनसिप खेल्ने तयारीमा थिइन् ।
उक्त घटनाको जांच गर्न आएको बम डिस्पोजल टोलीले लगभग दुई-तीन बजे राति सर्ट सर्किटको कारण अवकाशप्राप्त सैनिक चरण सिंहको घरमा आगो लागेको थियो । उक्त आगलागी भान्सासम्म फैलिएपछि ग्यास सिलिण्डरको पाइप जलेको र यसले फ्रिजको कम्प्रेसर पाइपभित्र रहेको ग्यासको प्रेसर बढेर विष्फोट भएको र उक्त विष्फोटले भान्सा कोठाको पर्खाल भत्किएर परिहारको छतमाथि खसेर उक्त दुर्घटना भएको थियो ।
निर्मलाको सिंगल रेप थियो कि ग्याङ रेप? खुल्यो यस्तो रहस्य
उडायो सपना सबै हुरीले! यसरी सपनामै रह्यो बामदेवमाे साँसद बन्ने सपना!